မြိုင်ကြီးငူ စစ်ဘေးရှောင် စခန်းသို့ လိုင်ဇာ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့နှင့် အလှူရှင်များက စားရေရိက?? - Yangon Media Group
မြိုင်ကြီးငူ၊ ဇူလိုင် ၂၂
ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကြီးငူရှိ စစ်ဘေးရှောင်စ ခန်းမှ ပြည်သူများထံ အလှူရှင်များက ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ အာလူး၊ အသားတု၊ ကြက်သွန်နှင့် စားသောက်စရာ ရိက္ခာများအား ဇူလိုင် ၂၁ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေစု ပေါင်းပြီး အလှူလိုက်ခံပါတယ်။ ပြီး တော့ ဒီမြိုင်ကြီးငူ စစ်ဘေးရှောင် စခန်းမှာ စစ်ရှောင်ပြည်သူ ၅ဝဝဝ ကျော်ရှိနေပြီး စားရေရိက္ခာပြတ် နေတဲ့အကြောင်းသိရှိရလို့ အခုလို လာရောက်လှူဒါန်းပေးတာပါ။ ကျွန် တော်တို့အနေနဲ့ တနိုင်းက စစ် ရှောင်စခန်း၊ ရခိုင်ဘက်ကဌာနေ တိုင်းရင်းသား စစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုလည်း အခုလိုသွားရောက်လှူ ဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်”ဟု ငြိမ်းချမ်းရေး ချီတက်ခဲ့ကြသည့် လိုင်ဇာလမ်း လျှောက်အဖွဲ့ဝင် ကိုထက်အောင်လင်းက ပြောကြားသည်။
ယနေ့လှူဒါန်းသော အလှူရှင်များမှာ ရန်ကုန်မြို့မှ လိုင်ဇာမြို့သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်ခဲ့သည့် လူငယ်များအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ လိုင်ဇာငြိမ်းချမ်းရေး လမ်း လျှောက်လူငယ်အဖွဲ့မှ ယနေ့လှူ ဒါန်းပေးသည့်ရိက္ခာများမှာ ဆန်အိတ် ၆ဝဝ၊ ဆီပိဿာချိန် ၁ဝဝ၊ အသားတုပိဿာ ၈ဝဝ၊ ဆားအိတ် ၂ဝ၊ အာလူးပိဿာ ၁၂ဝဝ နှင့် ကြက်သွန်ပိဿာ ၁ဝဝ တို့ဖြစ် ကြောင်းသိရပြီး လက်ရှိ မြိုင်ကြီး ငူစစ်ရှောင်စခန်းတွင် အိမ်ထောင်စု ၉၄၄ စု နှင့် လူဦးရေပေါင်း ၅၆၁ဝ ရှိကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးမြို့ အနာဂတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ''Mandalay: The Future We Want'' ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
သောင်ရင်းမြစ်ရေ ပြန်ကျသွားသော်လည်း မဲပလဲချောင်းရေ မြင့်တက်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၂ဝဝ ခန့် ထပ်မ??